Miidiyaa walabaa jechuun akkami ? – Wiirtuu Odeeffannoo Muslimtoota Oromiyaa
Miidiyaa walabaa jechuun akkami?
Hunda dura nageenni haa dursu akkam nagaya jirtuu cufti keessanuu?
Kanatti aansee waa’ee Gaazexaatii fii Gaazexeessaa irratti dhimma xiqqoo takka jechuu barbaada kanarratti immoo hundi keessanuu akka na hubattan Abdii qaba.
Akkuma beekkamu akkaataan Miidiyaan kumuu itti gulaaleffamu beekkamaadha kana jechuun kiyya, miidiyaan kumu akkaataa itti hundeeffamee fii waan irratti hundeeffame/ kaayoo hundeeffameef san calaqqisiisuu irratti xiyyeefatuudhaan gulaaleffama. Miidiyaa hunduu Toora ufii irra deemu qaba fakkeennaf:
Miidiyaa Garee Mormituu fii
Warreen kunni Sadiinuu akkaataan isaan ittiin gulaaleffaman gara gara. Fakkeennaf ka mootummaa yoo fudhannee, waan gaggaarii waan mootummaa bulchaa jiruu san leellesuu fii hujiin motummaan dalagaa jiru sun gunna biyyattii fidaa akka jiru irratti fuulleffatee gulaaleffama.
Miidiyaa garee Mormituu immoo: gareen amma biyya bulchaa jiru mirga hawaasa biyyattii akka miidhee fii erga angoo qabatee waan gaarii biyyatti hujee kan hin beeyne akkasumas biyyattii gara kufaatiititti geessa akka jiru kanaafuu hawaasni mootummaa kana akka uf irraa kuffisuuf hawaasa kakaasuu irratti xiyyeefachuun gulaaleffama.
Miidiyaan walabaa immoo: ilaalcha kana lachuu irraa bilisa ta’ee waan argame qofa bifa qabatamaatiin dabarsuu, waan gareen lamaan waliin waaman irra bilisa ta’uun wan jiru cufaa odoo irraa hin hir’isinii fii ittis hin eda’in ammas waanni mootummaan hawaasarraa dhoyse yoo jiraatee qoratee bira gayee Hawaasaaf gadi baasuu walumaa galatti waan lafa irratti argame qofarratti hundaayuun hawaasaaf gabaasa. Kana jechuun kiyya fakkeennaaf gareeleen mormituu kan Oromoo biyya keessaa fii alas ni jiru isaan kunniin gulaala miidiyaa isaanii akka siyaasaa isaanii waliin deemutti gulaaluu ni danda’an , miidiyaa mormaa waan jedhamuuf jecha.
Garuu miidiyaa Oromoo kan walabaa tokko yoo jiraate fakkeennaf jechoota ( Naafxanyaa, wayyaanee, Sha’abiyaa, shororkeessitoota) jedhutti dhimma bayuun isa irra hin jiru garuu bifa gaafii fii deebiitiin / yaada kennachuu irratti abbaan fedhe jechoota kanatti dhimma bayuu ni dan da’a gulaalessaanis jechoota kanneen keessaa muree hambisuu hin danda’u, yoo jechoonni kunniin gaarii miti jedhee keessaa mure Miidiyichi ulaagaa miidiyaa walabaa ta’uu hin guunne.
Ar’aaf asuma irratti dhaaba abbaan waa’ee miidiyaa ilaalchisee gaafii na gaachuu feetan yeroo kamuu na qunnamuu ni dandeettan galatoomaa.